DAAWO:- Odayaasha Hawiye oo fariin adag udiray Madaxda DFS “Muqdisho beel ayaa leh yaan la siyaasadeen”.
June 11, 2019 Xafiiska Puntland Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 9
Kulan ay isugu yimaadeen qaar kamid ah waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Banaadir ayay kaga hadleen arimaha kusaabsan muranka ka taagan maqaamka gobolka Banaadir.
Kulanka ayaa waxaa ka hadlay qaar kamid ah odayaasha muqdisho ayaa waxay sheegeen inay ka digayaan in la siyaasadeeyo maqaamka Muqdisho.
Waxaa hubaal ah in Masaakiinta daarood hadii ay kasoo tagaan Muqdishow oo xoolahooda ay soo xaraashtaan ayaga ay kasoo tagaan Kuwa daawada ku qaata oo ku jiraha Baarlamaanka kan hoose iyo kan Sare waxaa hubaal ah iney dhacayso Habargidir oo ah kuwa wata mashruucaan in ay maalin ka saareyso magalada Abgaal oo u riixeyso Kaaraan
Kuwa daawada halkaas ku cunaaya iyo caadaqaatayaalka inay arki doonaan horumarkaka jira degaankooda oo aan ka jirin ficilkaas
Muqdisho aniga dagan meel hawiye ku shirayna ma jirto hawiyena xamar ma wadadago waxaa dhibatada iyo qar iskaxoorka ee marba meel ku shirayo waa h.gidir oo an wax dagana muqdisho kulahayn war maa runta la isku sheego xagee xamar ka dagtaa mise waxa dadka dhagahoda lagu celcelina wagay lahayen kismayo anaga dagno oo baydhabo anaga dagno marka anaga dagno manta sheekada waxay maraysa xamar anga dagno way ku celceliten ilaa ay dadka run uqatan wasaqda xamar mawaxa lagu daga guri biliqo ah iyo isbital dowlad iyo xero ciidan ay dowlad leedahay hadiise daganka xamar laga hadlayo aaway jarer iyo reer xamad abgaal iyo murisda gartaye away xawadle jowhar dagan away gaal jelel raxanweyn away marexan gado dagan xagee la isugu idha sarcadinaya dadka baraxley dagan ee mooryanta
Soomaalidii Talyaanigu Gumaysan jirey ama Koonfurta kolba sida loo yaqaano waxa aafeeyay ee jahadii ka khalkhaliyay waa Federaal aanu wuxuu ku saleysan yahay aaney garaneyn oo ay Qaateen. Dhulkaas meel walba qabiil ama qabiilo khaas ah ayaa dega. Ma jirto Magaalo kelideed la odhan karo qabiil bey ka caagan tahay. Kolkaas hadii Federaalkiiba lagu saleeyay Hab Qabiileysan, su’aashu waa halkee Caasimad u noqon karta. Taasi Dastuurka kuma Qeexna. Goblka Banaadir dadkiisii ayaa garan la sidey xuquuqdoodiina u heli lahaayeen, Caasimadiina u noqon lahayeen. Iyagu waxay leeyihiin labadaba waanu noqon karnaa. Arimaha Gobolkana anaga ayaa xukumeyna. Kuwa Qarankana Dawlada Dhexe ayaa xukumi karta. Labadaasna waa la’is waafajin karaa. Maamuladii kalena uma ogola. Waxey leeyihiin anagana waxayagu waa noo gaar tiinana waa inaanu idinkula dhuuqnaa. kkkkkkkkkkkkkkkk
Sida keli ah ee u banaan waa iyaga oo Federaalkaba daaqada ka tuura oo Dawlad Dhexe iskugu yimaada. Gobol Walbaana uu Gaarkiisa usoo Doorto Badhosaab iyo Dawlado Hoose. Dawlada Sarena si siman u wada xukunto.
Inta uu Federaalkan wareersani ee Qabiilku sii qasay meesha ku jiro Soomaaliya meelna uma socoto. Taasi waa xaqiiq aanan laga talaabsan karin. Cunaha ayay is wada heysaneysaa. Aakhirkana waxay ku danbeyn doontaa dagaalo horleh iyo degenaansho la’aansho baahda ama kala jajab iyo tafaraaruq hor leh.
Su’aasha ugu muhiimsani waa yaa u garan doona dee.
Waa runtood oo beel baa iska leh si ka xun tii afweyne buu wiilkani u dhaqmayaa iyagoo aan puntland iyo jubaland midna tegi karin ayuu cidii soo dhoweySey ku xaaraya
Ninyahow Xamar wixii ka dhcay qof walba waa ogyahay Habargidirtii ciidamineysay Caydiid iyo Shabeel iyo Cabdi Qaybdiid oo ka wada yimi gobolada dhexe Dagaalkii ay AbgaaliyoMurursade ku qaadeen oo ay magaalada banaankeeda dhigeen waa la xusuustaa. Dawlad neceybka meel walba waa ka soo galeen waxna waa u soconwaayay Hada waa qilaafka Banaadir KKKK Adeerayaalow Habargidirey ama Habar waakaneysafar ooku noqo duduntaatii Xamar sar kuuguma taalo Dadka ah Abgaal, Reer Xamar, iyo Soomaalida kale u daa haka tashtaan ayaha
Waa munaafaqad maantase kuu shaqayn mayso inaad is leeyahay Hawiye kala qaybi Marse hadii aanad Awoodada ku jooji karin silic baad ku danbayn
Sida aad sidaa isugu haysataan, ayaa la idinka dhex qaadayaa, iska hadaaqa sida caruur yar yar. maley biya ku dhex jira ee la ilaashanayo ayaad tihiin, wadankaan dadkii dad u noqon lahaa, waa la diyaariyey. idinkuna waad iska dhamaaneysaan, iyaga ayaad Xamaali iyo adoon u noqoneysaan. waana imaan doontaa taaasi walee.
Waa dadkii Muusa qafil , waxa leelahaan wax ku qorayaa, ka baxa arrimaha Hawiye xaaraan yahay, idinkiibaa iscunaya, cidurka Kansarka ee aad qabtiin hanaala imaanina, Somali waxa qaribaa waa idinka, waxaad tihiina malaha, argagixisade Xamar idinkaa keenay. warhow edeb yeesha, afarta xabboee Xamar idinka joogtana waa la soo eryaa dhowaan.
Tolkood Bay la Joogaan waxba Ciiro haysku qarin sunta somali ku jirtaa waa daarood weliba waa halamash naagood harti